​बस्दा खुट्टा हल्लाउने बानी भए होस गर्नुहोस् !
न्यूजलय बिहीबार ०४, माघ २०७४
तपाईं बस्दा वा पल्टिँदा खुट्टा हल्लाइरहनुहुन्छ भने यो रेस्टलेस सिन्ड्रोम हो । शरीरमा आइरनको कमी भएमा यस्तो लक्षण देखापर्छ ।
यो समस्या संसारभरिका १० प्रतिशत मानिसमा हुने गर्दछ । धेरैजसो अवस्थामा ३५ वर्षभन्दा माथिका मानिसमा यो समस्या देखापर्छ ।
यो रोगबाट पीडित व्यक्तिले....
​सिरानी लगाएर सुत्नुहुन्छ ? सावधान ! अनुहारलाई हानि पुर्याउँछ
न्यूजलय बुधबार ०३, माघ २०७४
दिनभरिको थकानपछि तपाईं मीठो निद्रा चाहनुहुन्छ अनि ओछ्यानमा नरम सिरानी लगाएर सुत्नुहुन्छ । तर वास्तविकता के हो भने सिरानीले तपाईंको छालालाई हानि पुर्याउँछ ।
सिरानीमा धूलो, कपाल, रौं र तेलजस्ता कुराहरू हुन्छन् । तपाईंको अनुहार सिरानीको सम्पर्कमा आउँदा त्यसमा....
​सुन्दर बन्नका लागि खानुहोस् बन्दागोभी
न्यूजलय मङ्गलबार ०२, माघ २०७४
बन्दागोभीमा प्रशस्त मात्रामा फाइबर, बिटाक्यारोटिन, भिटामिन बी१, बी६, भिटामिन के, ई, मिनरल्स, सल्फरका साथै आइरन पाइन्छ । जुन स्वास्थ्यका लागि निकै लाभदायी हुन्छ ।
यसले शरीरलाई स्वस्थ राख्नुका साथै बिभिन्न रोग लाग्नबाट बचाउँछ । त्यसैले बन्दागोभीको नियमित सेवन गर्नु स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक हुन्छ ।....
​के तपाईँलाई अल्सरको समस्या छ ? यसो गर्नुहोस्
न्यूजलय सोमबार ०१, माघ २०७४
गलत खानपान वा कुनै रोगका कारण धेरै मानिस अल्सरको सिकार बन्न पुगेका छन् । अल्सर विभिन्न किसिमका हुन्छन्, अमाशयको अल्सर, पेप्टिक अल्सर र ग्यास्ट्रिक अल्सर । समयमै अल्सरलाई ध्यान नदिँदा क्यान्सर पनि हुन सक्छ ।
पेनकिलरहरूको अत्यधिक प्रयोग, चियाकफीको अत्यधिक सेवन, गरम मसलाहरू धेर....
​दाँतमा किरा लाग्न नदिन के गर्ने ?
न्यूजलय आइतबार ३०, पुष २०७४
बिहान बेलुका खाना खाईसकेपछि फोलोराइडयुक्त पेस्टले दाँत माज्ने । दाँत माज्दा चपाउने भागमा पनि माज्ने ।
बिस्कुट चक्लेट तथा अन्य खानेकुरा खाईसकेपछि सकेसम्म....
​व्यायाम नगर्दा के हुन्छ ?
न्यूजलय शनिबार २९, पुष २०७४
हिजोआजको व्यस्त जिन्दगी र अल्छीका कारण हामीहरू व्यायामलाई बेवास्ता गर्छौं । नियमित व्यायाम गर्दागर्दै पनि एकदुई दिन अल्छी गरियो भने व्यायामको बानी छुट्छ । यसो गर्नु स्वास्थ्यका लागि हानिकारक मानिन्छ ।
राम्रो स्वास्थ्यका लागि नियमित व्यायाम अत्यन्तै आवश्यक हुन्छ । व्यायाम गरेपछि हाम्रो पूरा....
देशभरका नर्स आन्दोलित, १ घण्टाका लागि काम छाडे
न्यूजलय शुक्रबार २८, पुष २०७४
काठमाडौं । मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रका नर्सहरुको पुर्नवहालीको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रेका दशभरका नर्सहरुले आज एक घण्टा काम छाडेका छन् । उनीहरुले आज बिहान १० बजेदेखि ११ बजेसम्म काम छाडेका हुन् ।
भक्तपुरस्थित मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रले तीनजना नर्स सहित सात जनालाई कामबाट निस्काशन....
के तपाईँ मदिरा पिउनु हुन्छ ? सावधान ! ब्रेन ड्यामेज होला
अहिलेका युवापिडीहरु मदिरा सेवन गर्न माहिर छन् । तर, मदिरा सेवन गर्दा के कस्तो बेफाइदा हुन्छ भन्ने विषयमा चासो राख्दैनन् । यस्तै, मदिराहरु मध्येको एउटा रुसलान भोड्का भन्ने मदिरा पिउनु एकदमै खतरनाक मानिएको छ । यसको सेवनले ब्रेन ड्यामेज हुने बताइएको छ । देख्दा निकै....
​यसकारण खानुहोस् सखर
न्यूजलय बिहीबार २७, पुष २०७४
माघे संक्रान्ति नजिकिएसँगै बजारमा चाकु र सखरजन्य पदार्थ पाइन थालेको छ । सखर वा चाकूको प्रयोग परम्पराका साथमा स्वास्थ्यसँग पनि जोडिएको छ ।
सखर खाँदा तत्कालका लागि शक्ति प्राप्त हुन्छ । तर, यसलाई औषधिका रूपमा पनि प्रयोग गरिने कुरा कमैलाई थाहा हुन सक्छ ।....
​एक महिनाअघि नै यसरी थाहा पाउनुहोस् हर्टअट्याक हुन लागेको
हृदयघात जतिखेर जहाँसुकै कसैलाई पनि हुन सक्छ । हृदयघातका कारण हरेक वर्ष धेरै मानिसले ज्यान गुमाउनु परेको छ ।
बूढाबूढीलाई मात्र हृदयघात हुन्छ भन्ने हुँदैन । यौवनावस्थामा रहेका व्यक्ति पनि यसको शिकार बन्न पुग्छन् । हृदयघात हुनुभन्दा एक महिनापहिले नै यसको लक्षण देखिन शुरु....